Jananinepal.comउसको सोचाईले मेरो भाग्यको निर्धाराण गर्छ - Jananinepal.com
उसको सोचाईले मेरो भाग्यको निर्धाराण गर्छ ।
मन्दिरको एउटा कुनामा एउटा माग्ने कचौराभरि गुच्चा बेच्न बसिरहेको छ । त्यही बाटो भएर राम गईरहेको थियो । त्यस माग्नेलाई रु १०० दियो तर उसले लिएन गुच्चा । उ सरासर पैसा दियो आफनो बाटो लाग्यो । फेरी फर्कीयर आयो र भन्यो याहाँ भएका केही गुच्चा मलाई दिन्छौ नि र उचित दाममा दिन्छौ नी भन्दै आखीर तिमी एक व्यापारी नै हौ म पनि व्यापारी नै परे भन्दै उ फेरी बाटो लाग्यो ।
पुन एक वर्ष पछि ती राम एउटा समारोहमा सहभागीता भएका थिए । त्यो माग्ने पनि त्यहि समारोहमा आएको थियो । माग्ने सुटलगाएर ठाटीएको थियो । माग्ने ले रामलाई चिनि हाल्यो र भन्यो तपाईले मलाई चिन्नु भयो । म एक वर्ष पहिला मन्दिरमा भएको बेलिवीस्तार बतायो । उसको कुरा सुनेर रामले भन्यो ए हो त है तेती बेला तिमि माग्न बसेको थियौ अहीले सुटमा ठाँटीएको छौ के गर्छौ ? तपाँईले मलाइ स्वाभिमान सिकाउनु भएको थियो । तपाईले गुच्चा हातमा लीइ भन्नु भएको थियो । यसको दाम उचित छ नि हैन ? आखीर तिमी एक व्यापारीन हौ र म पनि व्यापारी परेँ । तपाइँ त्याहाँ बाट हिँडेपछी मैले सोचेँ म याहाँ के गरीरहेको छु ? मैले जिवनमा केही नयाँ काम गर्ने सोच बनाय । मैले काम गर्ने थालेँ आज म याहाँ छु । त्यास दिन तपाईले मेरो स्वभीमान फर्काईदिनु भयो । तपाईलाई धेरै धेरै धन्यावाद दिन चाहान्छु ।त्यस घटनाले मेरो जीवन नै परीवर्त गराई दियो
माग्नेको जिवनमा के परीवर्तन भयो ? त्यो परिवर्तन हो स्वभीमानको वृदि जसले उसको कार्यक्षमताको सुधार । यो स्वभीमान अनुपम उदाहरणको एउटा नमुना हो ।
स्वाभिमान भनेको हामिले आफनो बारेमा राखेको धारणा हो । मेरो धारणाले काम व्यावसायमा , सम्बन्धमा , आमा बुवाको रुपमा हाम्रो भुमिका जिवनको सफलता र असफलताको निर्धारण धारणाको ठुलो भुमीका खेल्दछ । जव मैले मलाई नै चिन्दीन ,मलाईनै महत्व दिदिन भने तब सम्म म उच्च स्वाभीमानको हुन्न । आन्तरीक स्वाभीमानले आफुलाई बलीयो बनाउछ । जव म संग आन्तरीक स्वाभिमाने बलियो हुन् छ । तब मात्र मेरो जिवनले सफलता प्राप्त गर्छ ।